Nayakhabar.com: भर्खरै जन्मिएको शिशुमा दुई किलो ट्युमर ! उपचारका लागि सहयोग गर्न अपिल
भर्खरै जन्मिएको शिशुमा दुई किलो ट्युमर ! उपचारका लागि सहयोग गर्न अपिल
सिन्धुली । जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीमा करिव दुई किलो ट्युमर भएको शिशुको जन्म भएको छ । जिल्लाको कपिलाकोट गाविस ८ भुताहकी १७ वर्षकी टिकामायाँ स्याङतानको पेटबाट सल्यक्रिया गरी उक्त शिशु निकालीएको हो ।
चार किलो तौल भएको शिशुमा एकएक किलोको दुई वटा ट्युमर रहेको जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीकी डाक्टर सुमित्रा गौतमले बताईन् । बच्चा र आमा दुबैको स्वास्थ्य राम्रो छ । ‘सुत्केरी वेथा लागेको पाँच दिनसम्म बच्चा पैदा हुन नसकेपछि जिल्ला अस्पताल आइपुगेकी स्याङ्तानको सल्यक्रिया गरेर शिशुलाई निकालिएको हो, गौतमले भनिन् ।
बच्चाको घाँटी र कोखामा गरी दुईवटा पानी सहितको मासुको फोका छन् । आवश्यक चेकजाँच विना के भएको भन्ने एकीन गर्न नसकेपनि गर्भवती अवस्थामा आमाले प्रयाप्त पोषणयुक्त खानेकुरा खान नपाउँदा यस्तो भएको हुन नसक्ने डाक्टर गौतमले बताइन् ।
दुर्गम गाउँमा बसोबास गर्ने भएका कारण गर्भवतीले नियमित गर्भजाँच नगराउँदा पनि यस्तो समस्या आएको हो । ‘नियमित गर्भजाँच गराएको भए समयमा बच्चाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन सकिन्थ्यो । सोही अनुसारको उपचार हुन्थ्यो,उनले भनिन् ।वच्चाको अबस्था अनुसार तत्कालै सल्यक्रिया गरे बचाउन सकिने सम्भावना धेरै भएकाले काठमाण्डौं लैजान सुझाव दिएपनि आर्थिक अभावको कारण देखाउँदै स्याङ्तान परिवारले दुई दिनदेखि बच्चालाई जिल्ला अस्पतालमै राखिरहेका छन् ।
सहयोग गर्न परिवारको अपिल
बच्चामा ट्यूमर देखेपछि स्याङ्तान परिवार चिन्तामा परेको छ । ‘उपचार गर्न खर्च अभाव छ । नगरौं बच्चा बचाउन सकिन्न अब के गर्ने हो, दुई दिनकी सुत्केरी टिकामायाँले शिशुलाई देखाउँदै भनिन् । टिकामायाँको साथमा परिवारका जिम्मेवार मान्छेहरुसमेत छैनन् ।
बच्चाको शल्यक्रिया गर्न सके बचाउन सकिन्थ्योकी भन्ने उनमा चिन्ता छ । पहिलो सन्तान नै भगवानले यस्तो दिएपछि उनी दुई दिनदेखि आँसुमा डुबेकी छिन् । भन्छिन, ‘भगवानबाट त धोका पाए । मेरो कर्मपनि दुखी रहेछ । तर, सहयोग हातहरुबाट सहयोग पाए छोराको सल्यक्रिया गरेर बचाउन सक्ने थिएँ की ।ु
उनले सबैलाई आर्थिक सहयोग गरिदिन आग्रह गरेकी छिन् । बच्चाको शल्यक्रियाका लागि सहयोग गरिदिन जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीका चिकित्सकहरुले समेत अनुरोध गरेका छन् ।